Isgoyska la taagan yahay xagee looga gudbi karaa? | Dhacdo
Home Wararka Maanta Isgoyska la taagan yahay xagee looga gudbi karaa?
Isgoyska la taagan yahay xagee looga gudbi karaa?
Dadka Soomaaliyeed ayaa siyaabooyin kala duwan kaga falceliyay burburka ku yimid shirkii wadatashiga ee Dhuusamareeb iyo khudbaddii Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu Sabtidii u jeediyay Xildhibaanada Golaha Shacabka.
Prof. Afyare Cabdi Cilmi oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa is dultaag ku sameeyay nuxurka khudbaddii Madaxweynaha uu ka jeediyay Xarunta Golaha Shacabka, isagoo dhanka kalena ka hadlay halka looga gudbi karo isgoyska la taagan yahay.
“Hadalka Madaxweynaha hadal dheer buu ahaa, hadal taariikh u badan buu ahaa, taariikh kala dhimana way ahayd runtii. Sida uu asagu wax u arkay ayuu meesha ku soo bandhigay. Marka dee wax badan uu ka tagayna way jireen, wax badanoo waxa uu sheegay ka run ahna way jireen.” Ayuu yiri Prof. Afyare Cabdi Cilmi oo la hadlay BBC.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in Madaxweynuhu uu haystay waqti badan oo wax kaga qaban karay in dalka laga qabto nooc uun doorasho oo heshiis lagu yahay, balse uu ku guuldareystay.
“Waa ayaan-darro weyn afar sano oo la soo dhaafay in arrinta doorashada la xiriirta aan wax horumar ah laga sameyn. Anigu waxaan aaminsanahay Madaxweynaha waqti badan oo ku filan waa uu haystay, laba mid inuu sameeyo ayay ahayd. In doorasho waqtigii uu haystay ku qabto ama mid dadban ha ahaato ama mid toos ha ahaato oo doorasho leesla ogolyahay, oo sharci ah uu qabto waqti afar sano ah ayuu haystay, wuu ku guuldareystay, haddii taasi dhici weyso waxaa furnaa in heshiis siyaasadeed uu la galo daneeye-yaasha siyaasadda, mucaarad, muxaafid, Dowlad Goboleedyo ha noqdaan oo markaa dadka heshiiskaasi siyaasadeed, oo haddii muddo kordhin loo sameynayo ama hab kale oo doorashada loo wajahayo inuu keeno.” Ayuu yiri Afyare Cabdi Cilmi.
Prof. Afyare ayaa ku waramaya in iminka la haysto ikhtiyaar badan oo looga gudbi karo isgoyska la taagan yahay, haddii uu dhammaad yahay muddo xileedkii Madaxweynaha.
“Ikhtiyaar badanaa jiro ama khayraad fara-badanaa jiro, khayraadkaas waxaa ka mid noqon kara in shirweyne qaran leeskugu yimaado, in muddo kordhin noocyo kala duwanaa jira la sameeyo, in Baarlamaankan hadda jiro wax doorto ama in Madasha Hoggaanka Qaran (National Leadership Forum) la aado. Marka waxyaabaha badan ee la samayn karo hadda in leeska wareysto uun bay noqoneysaa.” Ayuu yiri Prof. Afyare.
Previous articleGabar dhalinyaro ahayd oo caawa lagu dilay Magaalada Baydhabo
Next articleTaliyihii Nabad Suggida Dhuusamareeb iyo 9 askari oo qarax lagu dilay